Hiran State - News: Wariyaha sanadka Ayaanle Hussein Abdi oo dil ka bad baaday.
· Total Members: 131,301
· Newest Member: RomleadsSmola
Wariyaha sanadka Ayaanle Hussein Abdi oo dil ka bad baaday.
Wariye Ayaanle Hussein Abdi ayaa habeenimadii Jimcaha rag hubeysan ay weerar kuqaadeen xili uu kabaxayay gurigiisa oo kuyaala xaafada East light ee Magaalada Nairobi.
Sadex nin oo Kenyan ah oo laba kamid ah ay hubeysanyihiin ayaa rasaas kufuray Ayaanle xili uu kusocday halka uu gaariga shaqada uqaado utaagna oo wax kayar labaatan Mitir ujiray irida guriga.Waxaana uu Ayaanle mar kaliya ka warhelay rasaas lagu furay iyo rag isku duubay oo ugu dhaqaaqay baarasho, waxaana ay jeebkiisa kala baxeen dhamaan decomentigii uu dalka kujoogay iyo waraaqihii Shaqada.
Wariye Nimco Xasan oo goob joog ahayd isla markaana arkeysay marka ay ragu weerarayeen Ayaanle ayaa sheegtay sida marki ay ragu baarteen kadibna aan bilownay in aan ku qeylino inaga oo aanan wali gaariga ka dagin ayaan arkayay nin dhowr jeer toorey ku garaacay Ayaanle oo markaasi isgiijinayay iskuna dayay inuu kabaxsado waxaana mid kamid ah Tooreyda ay kaga dhacday Gacanta bidix inta udhaxeysa garabka iyo xusulka.
Mar kaliya ayay ragii bilaabeen inay cararaan waxaana Ayaanle isaga oo gacanta halki dhiigu kabaxayay cadaadinaya uu soo fuulay gaarigii waxaana aan toos u aadnay Isbitaalka Agakhan ee Magaalada Nairobi iyaga bilaabay inay dhiiga ka joojiyaan isla markaana ay daweeyaan.Wariye Amin Caamir oo ay aad isugu dhowyihiin Ayaanle Xuseen Cabdi ayaa shabakada Wariyaha usheegay in Ayaanle uu wanaagsan lagana saaray Cisbitaalkii oo hada uu la joogo qoyskiisa.
Amin ayaa sheegay in raga weerayay aanan wali lagaraneynin waxa ay ahaayeen waxaana markii hore ay ku fureen rasaas ilaahay ayaana ka badbaadiyay waxaana gacanta ka gaaray dhaawac kadib mindi ay ku dhifteen isaga oo ka ilaashanayay in Caloosha ama feeraha ay kala helaan.Amiin ayaa sheegay in ay tahay markii labaad oo mudo sanad ah oo uu Ayaanle joogo Nairobi uu ka badbaado isku day burcad dooneysay inay dhacaan ama ay dilaan.
Mana ogi buu yiri Amin sababta ka dambeysa iyo qolada ay yihiin burcadan
inkasta oo Nairobi ay tahay meel aanan amaankeedu wanaagsaneyn.
· admin on December 26 2010 19:10:46 · 0 Comments · 5520 Reads ·
10,312,148 unique visits